Nigeria oo noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriya Wareegga 16-ka Koobka qarammada qaaradda Afrika… + SAWIRRO – Gool FM
(Qahira) 26 Juunyo 2019. Nigeria ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee u soo baxa wareegga 16-ka Koobka qarammada qaaradda Afrika 2019, kaddib markii ay garaaceen dhiggooda Guinea.
Xulka Nigeria ayaa 1-0 ku garaacay xulka uu ka tirsan yahay ciyaaryahan Naby Keita ee Guinea.
Kulankan ayaa ahaa mid aad u adag, waxaa qeybtiisii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad xulka Nigeria ayaa helay goolka qura oo ay guusha ku qaateen, waxaana 73’daqiiqo u dhaliyey Kenneth Omeruo, kaddib markii uu Guinea madax ugu shubay isagoo ka faa’iideysanaya koorno ama gees laad uu soo qaaday Moses Simon, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 1-0 ay ku adkaadeen Nigeria.
Xulka Nigeria ayaa sidaas ku noqday xulkii ugu horreeyey ee u soo baxa wareegga 16-ka Koobka qarammada qaaradda Afrika sanadkan, waxaana ay ka soo baxeen Guruubka B oo ay kula jiraan Madagascar, Guinea iyo Burundi.